Thursday March 14, 2019 - 17:48:02 in News by M Jiglan
Halkan Kaga Boggo Warka Oo Dhamays-tiran
Hargaysa(HWN)Badhasaabka gobolka togdheer Xamse Maxamed Cabdi ayaa dhawaan waxa uu shaaciyay in lacag kor u dhaafaysa sodon milyan oo lacagta somaliland ah uu la baxsaday xisaabiyihii gobolka togdheer,waxaana uu guddoomiyahu wakhtigaasi sheegay in lacagta uu la baxsaday ay tahay lacagtii mushaharka shaqaalaha ka hawl gala magaaladda burco.
Badhasaabku maalintii shaaciyay in lacagtii shaqaalahu gacantiisa ka maqan tahay ayaa ugu war dambaysay shacabka waxaana ay taasi ka dhigan tahay inaanu badhasaabku wax hawl ah oo uu lacagtaasi ku baadi doonayo aanu muujin madaama oo ay bulshadu isaga war ka sugayo isagiina aanu wax xog ah oo xaga ay hawl marinayaana shaacin.
Shaqaalaha ka hawlaha gobolka togdheer Ayaa wajahaya culus ka haystay xaga dhaqaalaha madaama oo mushaharkii ay qaadan jireen oo ka maqnaa mudo laba bilood ah hadana lagu war-galiyay in lacagtoodii la dhacay taasi ku noqotay u qaadan wadaan madaama oo ay mushaharka ku mas-ruufaan qoysas iyo caruur.
Majirto qorshe kale oo xukuumadu inta laga war doonayo masuulkii lacagta la baxsaday ay ugu sii dabartay shaqaalaha taasi oo iyaduna ah qorshe kale oo xukuumadu ku hag-ratay shaqaalaha madaama oo xukuumadda uu masuul ka saran yahay ilaalinta mushaharka shaqaalaha.
Madaxwaynaha somaliland mudane muuse biixi cabdi oo safar kaga maqnaa dalka oo maanta ku soo laabtay magaaladda hargaysa ayaa laga dhul sugi doonaa talaabadda uu u muujiyo shaqaalaha gobolka togdheer ee la dhacay lacagtooda iyo qaabka uu u shaaciyay badhasaabka oo shacabku aanay soo dhawayn madaama oo ahayd in marka uu gacanta ku dhigo cida falka fulisay ay ahayd inuu shaaciyo.
Shaqaalaha ka hawl-gala gobolka togdheer ayaa hadii aanay xukuumadu lacagtooda keenan qorshe kale oo lagu siinayo waxa ay noqon doontaa in ay wajahaan mushahar la’aan bishii saddexaad ah,waxaana ay xisbiyadda mucaaradka oo ka hadlay ku taliyeen in xukuumadu iyadda looga baahan yahay in dadka shacabka ah siiso mushaharkooda.